Global Voices teny Malagasy » Voaheloka Ho Faty Ao Kafkastan · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Marsa 2015 3:16 GMT 1	 · Mpanoratra Mohamed Hassan Nandika Naomy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Fahalalahàna miteny, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
“Sarivongana Kafka, Prague” Sary avy amin'i Myrabella / Wikimedia Commons. Zon'ny mpamorona: CC BY-SA 3.0 tao amin'ny Wikimedia Commons.
Raha efa namaky ny “The Trial (Ny Fitsarana) ” nosoratan'i Franz Kafka ianao, dia ho fantatrao ny dikan'ny voambolana hoe “Kafkaesque”.
Nosamborina tampoka ilay mpiasan'ny banky antsoina hoe Josef K, mpandray anjara voalohany amin'ny “Ny Fitsarana”, ary miaro ny tenany manoloana ireo fiampangana azy- izay tsy fantany akory. Tao anatin'izany, nahita ny fahasarotan'ny fanoherana ny fanjakam-birao mivady amin'ny tsi-refesi-mandidy (totalitarisma) i K.
Zato taona taorian'ny nanoratana “Ny Fitsarana”, miharihary fa nanafoana ireo karazana endrika tsi-refesi-mandidy sy fanjakam-birao ny olombelona. Tsy misy olona tsy manantsiny miakatra fitsarana intsony. Manjaka manerana izao tontolo izao ny rafitra mahombin'ny fitsarana . Vokatry ny fisaintsainako ity nofy ity, izay nananako taorian'ny famakiana ny tantara. Fahadisoan'ny zavamisy ihany izay mety ho kisendrasendram-pitoviana.
Tonga tao amin'ny efi-pitsarana izahay. Miditra ny efitrano ny mpitsara ary manambara ny fisokafan'ny fotoa-pitsarana ny mpiraki-draharaha. Mipetraka ny mpitsara ary manomboka mamaky ny taratasy: “Rehefa avy nandinika ny porofo nomen'ny mpitory sy ny voampanga, nahita izahay fa meloka tamin'ireo fiampangana azy ireo voampanga . Manameloka ireo voampanga 1, 2 sy faha-3 hovonoina ho faty izahay noho ny famonoana polisy manampahefana efa nomanina mialoha. Manameloka ireo voampanga laharana faha-4 hatramin'ny faha-11 higadra mandrapahafaty kosa izahay noho ny fandraisana anjara tamin'ny famonoana polisy manamboninahitra. Mangataka amin'ny Minisitry ny Atitany ihany koa izahay mba hanafoana ny maha-olom-pirenena ireo voampanga laharana voalohany hatramin'ny faha- 8 noho ny heloka fampihorohoroana. Misintona ny fitsarana”.
Arahan'ireo mpiambina mivoaka ny efi-pitsarana ireo voampanga. Nofatorana rojo vy ny tanan'izy ireo ary nentina tao anaty fiaram-pitaterana maizimaizina, misy varavarankely makarakara. A, (voampanga lah), mipetraka eo amin'ny sisin'ny sezan'olon-droa. Misy lehilahy iray mipetraka eo akaikin'ny varavarankely mifanila amin'ny sisin'ny fiara. Mandehandeha manerana ny fiara ny mpiambina iray, manisa ireo gadra. Rehefa nandalo teo amin'ny A ilay mpiambina, nanome tsiky kely izy. Nanamarika avy eo ilay lehilahy hafa eo amin'ny sisiny mifanila. Hoy izy tamin'ny A: “Tsy fantatro izay niampangana anao, saingy sambany aho nahita ny iray amin'izy ireo mitsiky. Ahoana ny tantaranao?
Mamaly amin'ny feo tokana i A: “Tsy nanao na inona na inona aho.”
Namaly ilay lehilahy iray hafa hoe: “Eny, mino anao aho.” i A namaly hoe: “Nahoana ianao no matoky lehilahy mifatotra rojo vy ny tanany? Ary azoko anontaniana ve ny anaranao?” Nihomehy ilay lehilahy iray ary nilaza hoe: “Samy mifatotra rojo vy ny tananIsika, tsy matoky na iza na iza ao anatin'ity fiara ity aho ka tsy mifatotra rojo vy ny tanany. H no anarako. ary fantatro fa tsy meloka ianao. “
“Inona no mahatonga anao matoky be tahaka izany?” hoy i A nanontany. “Satria tsy mampiseho mariky ny nenina ny fihetsikao,” hoy i H namaly. Nisento lalina i A ary nilaza hoe: “Mahatonga ahy toy ny nahavita izay nanamelohana ahy ve ny tsy fisian'ny nenina amiko?” Namaly tamin'ny feo manesoeso i H:” Tsy mampiseho nenina noho ny heloka bevava ireo meloka, fa mampiseho nenina noho ny fahatratrarana azy ireo. Ianao, eo amin'ny lafiny iray, mampiseho fa tsy misy nenina na: Muselmann  ianao. ” Inona izany Muselmann? ” hoy i A nanontany.
Tsy namaly ny fanontaniana i H: “Tantara lava be izany. Mety hanam-potoana hiresahana izany isika raha iray efitra any am-ponja. Sambany hiditra am-ponja ve ianao?” “Fanintelony aho izao” hoy i A
“Eny, sambany ho ahy izao,” hoy i H. “Lazaina fa meloka noho ny fitarihana fankahalana ny fitondrana aho.” Nanontany indray i A hoe: “Ary ahoana no nilazan'izy ireo fa nanao izany ianao?” Namaly i H hoe: “Milalao teny aho, mpanoratra tantara aho” Talanjona i A.” Inona no karazana tantara soratanao? Tantara ara-politika?” ” Tsia, nanoratra tantaram-pitiavana aho”, hoy i H, miaraka amin'ny tsiky teny amin'ny endriny. “Mitarika fankahalana ny ve tantaram-pitiavana? Ahoana no mampitombina an'izany” hoy i A.” Tantaram-pitiavana nitranga teo amin'ny olon-droa avy amin'ny vondrom-poko samihafa izany “, hoy i H.,” ary nitranga talohan'ny fahatongavan'ny fitondram-panjaka tokana izany. Hitan’ izy ireo fa raha niteny aho fa nahavita zavatra sarotra noho ny fitiavana ny olona tamin'ny mbola tsy nisian'ny fitondram-panjaka tokana, dia mety azo atao ny zavatra hafa rehetra. “
Niato kely i H. “Izany no tantarako,” hoy izy. “Afaka manontany anao ve aho ankehtriny hoe hoe inona no tsy maha-meloka anao?” “Famonoana polisy manampahefana”, hoy i A. “Miala tsiny aho mandre izany,” hoy i H. “Nandre aho fa androany ny fitsarana izany. ” “Aza manahy. Efa nihavana tamin'ny anjarako aho “, hoy i A.” Maninona a?! Tapa-kevitra hiala an-daharana ve ianao? “, Hoy i H tamin'ny bitsika miahiahy. Namaly tamim-pahatoniana i A hoe: “Tsy miala an-daharana aho. Nanaiky ny zavamisy fa nanao izay azoko natao aho fa tsy manan-tsafidy intsony.”
“Hanaiky tsy maintsy ho faty noho ny heloky ny olon-kafa ianao?! Lazao ahy azafady hoe ahoana no nilazana anao fa meloka? ” hoy i H.”Nanolotra fijoroana vavombelona nosoniavina aho  fa tany am-piasana tamin'ny fotoana nitrangan'ny loza. Nanapa-kevitra tsy hiraharaha ny fisian'izany ny mpitsara. Hoy i A.
“Mazava ho azy fa tsy hiraharaha tokoa izy”, hoy i H. “Mora kokoa ny mahita olona meloka. Mamarana ny fanadihadiana izany. Ary tsy zava-dehibe ny fahitana izay meloka. Raha ny marina, tsy miraharaha ny olona ny fitsarana ara-poko: novonoina ny iray “amintsika”, ka tsy maintsy mizaka izany ny telo “amin'izy ireo”. Hifaly avy eo ny olona avy etsy ankilany. Na dia ny haino aman-jery aza hanadino hilaza izay zavatra momba anao. Hoesorina aminao izay rehetra mamaritra anao. Holazaina fa mpikambana ao amina vondrona ara-poko iray  ianao. Hahazo valisoa ny mpitsara; hahazo fifanarahana vaovao mitentina an-tapitrasany  ny rahalahiny sy ny rainy”
Nanontany i A: “Nahoana no tsy nanoratra momba izany ianao teo aloha?” Hoy i H namaly: “Tsy ara-dalàna izany. Sao ho voaheloka amin'ny fanaratsiana manampahefana ambony aho.”
“Tsy zava-dehibe izany ankehitriny”, hoy i A. “Manantena aho fa hoavy alohan'ny hanatanterahana ny didim-pitsarana ahy ny fiovana.” Tezitra i H: “Mihevitra ianao fa hitondra fiovana ireo izay nahavita nandatsaka ain'olona marina? Tsy hitanao ve ny fomba fampiasan'izy ireo ny teny toy ny hoe herim-po, voninahitra, faharetana, fitsipika sy ny hafa mba hanehoana fa ara-dalàna ny ataon'izy ireo, kanefa mamela lehilahy tsy manan-tsiny hovonoina noho ny helok'izy ireo? “Namaly tamim-pahatezerana ihany koa i A:” Ahoana no ahafantaranao fa tena nanao zavatra tsy mety izy ireo? “Satria namoaka didim-pitsarana nilaza izany, “hoy i H.. “Indray andro, nisy bilaogera iray tafaraka tamiko tato amin'ny efitra figadrana. Nolazainy tamiko fa nosamborina noho ny zavatra notakian'ny olona izy, dia ireo olona izay miaro ny famotsorana azy ireo ihany. Saingy tsy te hanadihady lalina izy ireo ary nanonona izay tompon'andraikitra. Na dia vondrona mahery fihetsika be aza tsy hamafa ny anaranao. “
Satria nijanona ny fiara ary nitsangana hiambina ireo gadra hivoaka ny mpiambina, dia nanao fangatahana farany tamin'i A i H. “Miangavy anao aho: Aza mandao. Aza avela hahatonga anao ho famenon'ny antontan'isa fotsiny izy ireo. Asehoy ny rehetra fa tahaka azy ireo ihany koa ianao, fa hitanao izay hitan'izy ireo, ary tsapanao ny fomba fahatsapan'izy ireo, fa raha maty ianao dia hamela reny ao anaty alahelo lehibe, tsy tsy zavatra natao hiadiam-barotra ara-politika ny fiainanao. “
Ity tantara ity, araka ny voalazako, dia noforonina ihany. Tsy misy firenena eto an-tany manasazy olona tsy manan-tsiny hovonoina ho faty. Ary tsy misy olona voasazy ho faty miandry fanavotana .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/03/25/68692/
 The Trial (Ny Fitsarana): http://www.gutenberg.org/ebooks/7849
 rafitra mahombin'ny fitsarana: http://www.hrw.org/news/2014/05/28/bahrain-system-injustice
 meloka tamin'ireo fiampangana azy ireo voampanga: http://www.alwasatnews.com/4556/news/read/965761/1.html
 fijoroana vavombelona nosoniavina aho: http://media.alwasatnews.com/data/2015/4556/images/main_loc-m-1-2.jpg
 Holazaina fa mpikambana ao amina vondrona ara-poko iray: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-31638857
 fifanarahana vaovao mitentina an-tapitrasany: http://mahmood.tv/2011/12/29/the-multitasking-dhahrani/
 olona voasazy ho faty miandry fanavotana: http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/uaa04715.pdf